Sand INN Izidlele zam ~ Hamba uye elunxwemeni!
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguPam
Lonwabele ixesha lesiqithi ngeholide yethu elungele i-condo! Uluntu oluphambi kolwandle olunokufikelela elunxwemeni, amachibi ama-2, iiklabhu ezi-2, intendelezo, iinkundla zentenetya, kunye nendawo yegrille. Konke kumgama wokuhamba ngebhayisekile ukuya kwiivenkile kunye neeresityu. Yonke into oyifunayo ukuphumla kwaye uphumle.
Isitudiyo sesithathu sezikhukula esinazo zonke izinto eziluncedo- ikhitshi egcweleyo, igumbi lokuhlambela elikhulu, indawo yokugcina eninzi, iibhedi ezi-2, umgangatho onetafile nezitulo, kunye nokunye okuninzi okuchukumisa okukhethekileyo!
Indawo yethu ngumgangatho wesithathu we studio condo enegumbi lokuhlambela elikhulu. Ibhedi ye-Murphy kunye nesofa yokulala (ibhedi yesofa) enokuthi ilungele abantu aba-4. Iitawuli kunye neelinen zibandakanyiwe ukuze ungakhumbuli ukuzisa. Ikhitshi egcweleyo ukwenza ezo zidlo zikhethekileyo. Konwabele ukutya ngaphakathi okanye kwidesika, okanye upakishe ukutya kwakho kwaye uhambe uye elunxwemeni ukuze ubukele ukutshona kwelanga!
Ikhitshi, indawo yokutyela, kunye negumbi lokuhlala liyindawo evulekileyo yokonwabisa. Ikhitshi ligcwele ngokupheleleyo iimbiza, iipani, iipleyiti, iikomityi, izitya, kunye nengqayi yamanzi yokucoca! Itafile ihleli abantu aba-4 kwaye inkulu ngokwaneleyo ukudlala imidlalo kunye nokwenza iipuzzle! Kukho izitulo zebha ezi-2 zokuhlala ezongezelelweyo. Igumbi lokuhlala libandakanya iTV enentambo esisiseko.
Igumbi lokuhlambela lineshawa/ibhafu kunye nobukhulu obungamampunge. I-closet kwindawo yokuhlambela ivuliwe ukuze kwandiswe indawo. Indawo eninzi yokugcina kuyo yonke i-condo ukubeka izinto zakho.
Kwidesika, unokuphumla kwitafile ye-polywood cafe kunye nezitulo ngelixa ujonge eyadini okanye ubukele ukutshona kwelanga kusihla emva kwemithi.
**I-Condo ikumgangatho wesi-3**
**Kufuneka uhambe ngeenqwelomoya ezi-3 zeenkwenkwezi**
****Uhlaziyo lwenziwa kwiNkanyamba uFlorence, ke ezinye izinto eziluncedo zisenokungafumaneki**
4.85 ·Izimvo eziyi-87
I-Emerald Isle lunxweme losapho, lumnandi kodwa luzele bubomi! Iindlela zebhayisekile, ukuhamba / ukuhamba ngeendlela, iindlela, ukufikelela elunxwemeni, ukufikelela kwisandi, iipaki zamanzi, igalufa encinci, iikhosi zegalufa, kunye nokuthenga, i-Emerald Isle yindawo ekumele ibe kuyo! Kwaye ulwahlulo lwethu, iPebble Beach isentliziyweni yayo yonke into. Nje ukuba ungene esiqithini ufika kwi-condo, ke akukho kulinda kwitrafikhi! Fumana ukutya kusiwe kwi-condo! Ngokukhawuleza xa ufika, akukho mfuneko yokuba ubuyele emotweni yakho. Bamba ibhayisekile kuba uhambo lwakho lulindile! Okanye ukuba ujonge iholide ethe cwaka kwaye epholileyo, thatha izitulo ezimbalwa ukusuka kumgangatho kwaye uhambe uye elunxwemeni ukuze uphumle. Njengoko ilizwi lihamba, "ihlabathi yimbatyisi yakho!"
Sichulumancile ukhethe i-condo yethu ethi "Sand INN My Cheeks" kwiholide yakho! Umyeni wam, intombi yam + nomyeni wakhe, unyana wam + nomfazi wakhe, kwaye sithenge le condo ngoFebruwari 2020 ukuze sikwazi ukwenza iinkumbulo ezikhethekileyo kulwandle esiluthandayo! Siyathemba ukuba uya kwenza ezi nkumbulo zikhethekileyo xa uhlala.
Sifumaneka nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho. Xa unxibelelana nathi, unokuva kum kodwa ikakhulu intombi yam (isiqhubela uluhlu). Nceda usazise nayiphi na imibuzo onayo!
UPam + Don, uLindsay + Gosch, kunye noCooper + Ashley
Sichulumancile ukhethe i-condo yethu ethi "Sand INN My Cheeks" kwiholide yakho! Umyeni wam, intombi yam + nomyeni wakhe, unyana wam + nomfazi wakhe, kwaye sithenge le condo ngoFebr…